DAAWO VIDEO:Dagaal Sadexaad Ma Dhaci Karaa Hadii Maraykanka Weeraro Iran Maxa Dhacaya Erdogan la Taliyey Sucudi. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeEnglish NewsDAAWO VIDEO:Dagaal Sadexaad Ma Dhaci Karaa Hadii Maraykanka Weeraro Iran Maxa Dhacaya Erdogan la Taliyey Sucudi.
September 18, 2019 marqaan English News, Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Wararka maanta 1
Toddobaadka dhamaadkiisa, xarumaha saliida ee Sacuudiga waa la weerarey, dagaalkii ugu dambeeyay ee la xiriira shidaalka ee Bariga Dhexe sanadkaan .
taas oo keentay kormeerayaasha qaarkood inay ka baqaan in tani ay si khatar ah uga sii darto Xaalada Bariga Dhexe Uuna Ka Dhaco dagaal Ana Jiho Lahayn. Markii hore, fallaagada Xuutiyiinta ee Yemen ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka.
Tan iyo markaas, maamulka Trump wuxuu ku eedeeyay Iiraan inay fulisay weeraradan, waxaana dowladda Sacuudiga ay sheegtay in hubka Iran uu ku lug leeyahay – oo dhammaantood Tehran ay beenisay. Ciyaartan eedeymaha siyaasadeed ee qarxa waxay ku dhamaan kartaa dagaal.
Laakiin muxuu Sacuudiga u aqbali karaa inuu aqbalo Diidmada Iran ee Weerarkii Xarunta saliida, halkii uu ku eedeyn lahaa Iran inay fulisay weerarka? Taasi macno malahan haddii Riyad ay doonayso inay si aargoosi ah uga aargudato; mugdiga ayaa ka dhigaysa wax kasta oo jawaab u eg mid aan sharci ahayn isla markaana khatar galinaya taageerada xulafada.
Puntland oo.shaqo usamaysay shaqaale dhawaan laga soo eryay Somaliland.
Maraykan mana weerari karo Iran xita kuma fekeri karo ileyn jab iyo halaag ayaa ka raacaaye.
iran ma aha ciraaq
iran ma aha yemen
iran ma ah syria
Iran wey ogtahay in lagu ixtiraamayo xoogeedda !